सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुनु पर्ने अर्को बलियो महिला र स्वायत्त छ मनोविज्ञान वा व्यक्तित्व र पहिचानको शक्ति जुन घमण्ड गर्न सकिन्छ। त्यसकारण बेज्जियामा हामी सबै महिलाहरूलाई आफुलाई मनपर्ने, बलियो हुन र निर्णय लिन मद्दत गर्न चाहन्छौं।
यसैले यस खण्डमा हामी तपाईंलाई कसरी स face्कटको सामना गर्ने, हाम्रा साथीहरू, साझेदार वा परिवारसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने वा तपाईंलाई स्पष्ट कुराको ब्यक्ति भएको व्यक्तिको चाबी बताउने सल्लाह दिन मद्दत गर्न चाहन्छौं।
यद्यपि हामी मनोवैज्ञानिकहरू होइनौं, हामीसँग यस विषयमा धारणा छ र हामी तपाईंलाई सुझावहरू दिन सक्छौं जुन तपाईंलाई तपाईंको मार्गको आन्तरिक पक्ष सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। हामी आशा गर्दछौं कि तिनीहरूले तपाईलाई मद्दत गरे।
स्टेज डर वा आतंक: यो कसरी पराजित गर्न को लागी
स्टेज डर वा डर केहि चीज हो कि धेरै मानिसहरु संग छ र यो उनीहरुको लागी यो सामना गर्न सजिलो छैन।
एक महान मनोवैज्ञानिक समर्थन को रूप मा घरपालुवा जनावर
उनीहरु हाम्रो जीवन को तर हाम्रो स्वास्थ्य को महान नायक हुन्। किनकि घरपालुवा जनावरहरु एक बनेका छन् ...
कसरी शर्म हटाउन र अधिक मिलनसार हुन
के तपाइँ लजालुपन लाई पार गर्न र अधिक मिलनसार हुन चाहानुहुन्छ? त्यसपछि तपाइँ यसको लागि सुझावहरु को एक श्रृंखला को जरूरत छ। किनकि यो एक छैन ...
चिन्ता र तनाव, मतभेद के हो?
चिन्ता र तनाव हाम्रो दिन को लागी हात मा हात जान्छ। किनकि दुबै सधैं उपस्थित छन् र हामी कुरा गर्न सुन्छौं ...
अवसाद संग एक व्यक्ति कसरी मद्दत गर्ने
अवसाद संग कसैलाई मद्दत गर्न सजिलो छैन। तर जब हामी यो धेरै नजिक छ, यो अपरिहार्य छ सोच्न को लागी ...
चालक क्रोध: यो के हो र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने?
जसरी यसको नाम सुझाव दिन्छ, हामी महान महत्व र अधिकतम तनाव को एक पल को बारे मा कुरा गरीरहेका छौं कि सामान्यतया छ ...
आत्म-अपमान: हामी आफैलाई किन अपमान गर्छौं?
द्वारा सुसाना Godoy बनाउँछ3महिना .
आत्म-अपमान ती भावनाहरु मध्ये एक हो कि हामी वर्तमान भन्दा धेरै दुर्भाग्यवश सोच्दछौं। यद्यपि अपमान ...
कसरी गर्ने यदि तपाइँको पार्टनरले तपाइँ सबै चीजको लागी दोष दिनुहुन्छ
तपाइँको जे भए पनि तपाइँको पार्टनरलाई सँधै दोष दिनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट संकेत हो कि केहि छैन ...
जोडी भित्र भावनात्मक ब्ल्याकमेल बढी सामान्य र साधारण मानिसहरूले सोच्न सक्ने भन्दा सामान्य छ। मलाई थाहा छ…